5 Email Optimization Atụmatụ na toba ụba na Clicks | Martech Zone
O nweghi otutu ihe kariri ihe omuma a site na ContentLEAD. Atụmanya jupụtara na email n'ihi ọnụ ala dị ala kwa ndu na ọnụego mgbanwe dị elu. Mana nke ahụ bụ nnukwu nsogbu… email gị na-efu na igbe mbata n'etiti narị otu narị ma ọ bụ puku puku ozi mgbasa ozi ndị ọzọ.
Kedụ ihe ị ga - eme iji weeiche ọdịiche dị na ozi email gị na igwe mmadụ? Lee usoro ihe dị n’ime mmewere nke ozi email yana mmetụta na njikarịcha nwere ike ịnwe:
Succinct isiokwu e nwere ike iduga 20% elu na-emeghe ọnụego na, ná nkezi.
Ekele nke onwe nwere ike iduga 129% elu pịa-site na ọnụego.
Ndị Na-abụghị Ndịọrụ Na-ekwu Okwu nwere ike iduga 24% pịa ọzọ.
Tinye Foto n'ihi na 82% mụbara anya.
Nkewa ozi na ndi mmadu na-eduga 50% pịa ọzọ.
N'ihi na mgbasa ozi email dị irè, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ọ bụla na-eji ha. Igbe ozi 'nke atụmanya jupụtara na ozi ịntanetị sitere na ụlọ ọrụ ndị ahịa gị ga-edozi ozi bara uru na spam. Ihe omuma ihe omuma a na-enye gi nlele anya nke oma nke ozi email na-aga nke oma ka i wee nwee ike iweta omume oma nke oma na ihe ndi gi na ndi na ege gi. Ọdịnaya
Tags: ụlọ ọrụ na-ekwu okwuemail pịa site na ọnụegoemail pịa-thru ọnụegoclicks emailihe oyiyi emailemail emeghe ọnụegoemail mepeeemail njikarịchaemail nkewaahịrị ederede emailekwu okwuahaziri ekele